News Collection: श्वेताको चाहना हरिवंश !
श्वेताको चाहना हरिवंश !
हुन त 'हाँसिदेऊ एकफेर'मा हिरोइन श्वेता खड्का र हाँस्यअभिनेता हरिवंश आचार्यले सँगै काम गरेका थिए । तर, श्वेता सर्पोटिङ भूमिकामा थिइन् भने हरिवंश ससुराको । पुनः एकपटक श्वेता हरिवंशसँग सँगै काम गर्न चाहन्छिन् तर उनकी हिरोइन भएर । निकै सिनियर हरिवंशसँग किन श्वेताले अपोजिटमा खेल्न रहर गरेकी ? भन्छिन् 'म सानैदेखि उहाँकी फ्यान थिएँ । उहाँका सिरियल हेर्थे र ठूलो भएपछि उहाँकी हिरोइन बन्ने कल्पना गर्थे ।'
'कहाँ भेटिएला' हिरोइनले आफ्नो चाहना चाँडै पुरा हुने पनि बताइन् । 'हरिवंश दाईकी हिरोइन बन्ने चाहना चाँडै पुरा हुन्छ' चलचित्र 'श्रीमान-श्रीमती'को सुटिङमा व्यस्त हिरोइनले सुनाइन् 'हरिवंश दाईसँग सँगै काम गर्ने चाहना सानैदेखिको हो ।' उमेर, अभिनय, पृष्ठभूमि सबै असमान हुँदाहुँदै पनि श्वेता हरिवंशकी हिरोइन बन्न चाहनुलाई हरिवंशले कसरी लेलान् ? हरिवंशको अभिनयमा भुतुक्क हुने श्वेता उनकी 'डाइहार्ट फ्यान' पनि हुन् ।
जे होस् अभिनय र चाहनालाई उमेरले छेक्दैन भनेको यही हो । 'कहाँ भेटिएला'बाट हिरोइनका रुपमा चर्चा बटुलेकी श्वेता श्रीकृष्ण होमप्रोडक्सनको दोस्रो फिल्ममा खेल्ने सम्भावना कम छ । किनभने कोरियाबाट फर्किएपछि उनी बेलायतका गैरआवसिय नेपालीले निर्माण गर्ने चलचित्रमा व्यस्त हुनेछिन् भने उक्त प्रोजेक्टको काम सकेर श्वेता अमेरिका टुरमा निस्कनेछिन् ।